Fampahalalana COVID-19 Jereo ny loharanom-baovao farany hanampy anao hiasa dieny izao sy handamina mialoha.
Maninona no KAMED
Izaho dia Chandler, mpanorina ny marika KAMED. Ity no marika reharehako. Rehefa nitsidika ireo mpanjifako tany ivelany aho dia nanontany foana izy ireo hoe maninona no atao hoe KAMED? Misy dikany manokana ve izy io? Namaly aho hoe eny. Tantara lava momba ny ray aman-dreniko miaraka amiko izany. Tamin'izay fotoana izay dia lasa ny fahatsiarovako tamin'ireny fotoana ireny…
Taona 2003 — Tamin'ny alin'ny fianarako tao amin'ny oniversite dia niambina ny SARS. Mpitsabo tsy tambo isaina no niady tamin-kerim-po teo amin'ny laharana voalohany amin'ny ady amin'ny SARS. Na dia ny mpitsabo sasany aza dia namoy ny ainy sarobidy tamin'ity ady ity, izay efa nahazo diplaoma avy amin'ny anjerimanontolo ara-pitsaboana, dia nahatsapa fa manana andraikitra lehibe izahay ary maniry ny hanandrana ihany koa. Nanantena izahay fa hahazo diplaoma ary hiditra ao amin'ny ekipan'ny dokotera faran'izay haingana, hanokana ny herinay hanavotana marary bebe kokoa, ary hamerina ny fandriampahalemana sy ny fandriam-pahalemana eto an-tany. Na izany aza, ho ahy, ankoatry ny fanahiana mitovy amin'ny mpiara-mianatra amiko, dia misy ihany koa ny ahiahy bebe kokoa momba ny havako.
Ny reniko sy ny anadahiko dia nipetraka tany Guangzhou, ilay faritra voadona mafy ao amin'ny SARS, ary norahonan'ny aretina ny ain'izy ireo na oviana na oviana. Niantso ny reniko tamin'ny toe-tsaina mikorontana aho isan'andro. Rehefa voaray ny antso dia nilamina tampoka ny foko nihantona, faly toy ny zaza eo an-tratran'ny reniko, mahatsapa ny hafanana sy fitiavana efa very hatry ny ela. Soa ihany, ny SARS dia voavahan'ny mpiasan'ny fitsaboana lehibe rehefa nahazo diplaoma aho. Isika rehetra dia mankamamy ity fiainana vaovao nandresena mafy ity. Nanomboka teo dia nisy voa nambolena tato am-poko: karakarao tsara ny fianakaviako ary mamorona marika ahafahako mianatra zavatra hahasoa olona maro kokoa.
Taona 2005 —— Taorian'ny fiofanana nandritra ny roa taona tao amin'ny orinasa fivarotam-panafody, dia nahafantatra zavatra betsaka momba ny fitsaboana aho, ao anatin'izany ny kojakoja ara-pitsaboana, fitaovam-pitsaboana, masontsivana momba ny vokatra ary ny fomba fampiasana fitaovana fitsaboana. Ny traikefa niasa nandritra ny roa taona dia nahatonga ahy hahafantatra ny fomba hahatanteraka ny nofiko faran'izay haingana sy afaka mampihatra izay nianarako. Niala tamin'ny asako aho ary nanomboka ny dian'ny fandraharahako manokana tamin'ny Novambra tamin'io taona io. Nanangana orinasa antsoina hoe CARE MEDICAL aho. Tsy nisalasala aho nifidy an'io anarana io. Satria saika namoy olon-tiako aho, nahafahako nanangana fahatsapana sy andraikitra matanjaka kokoa amin'ny fikarakarana tsara ny fianakaviako noho ny teo aloha. Manantena aho fa ny orinasako dia hanaparitaka ny fanekena ny maha-zava-dehibe sy tsy azo soloina ny havany amin'ny tanora maro kokoa. Ny teny filamatra ataonay dia: Mendrika hotandremana tsara ianao…. Raha ny marina dia mila karakaraina tsara kokoa ny fianakavianao ary manana andraikitra tsy azo sakanana amin'ny fianakavianao ianao.
Taona 2007 --- Tamin'ny andro normal iray dia nahazo antso avy tamin'ny raiko aho. Notantarainy tamiko fa mandeha rà ny kibony. Nametraka haingana ny nataoko aho ary nitondra azy nizotra tany amin'ny hopitaly. Mampalahelo fa voan'ny homamiadan'ny tsinay ny raiko efa antitra. Nandritra ny fotoana nampidirana hopitaly ny raiko dia nametrahako ny tànana rehetra ary nijanona niaraka taminy isan'andro. Rehefa hitako fa namboarina ho an'ny vatan'ny raiko ireo entana sy kojakoja isan-karazany amidiko, dia hitako tampoka fa tompon'andraikitra amin'ny olona mampiasa ny vokariko aho. Ny marary rehetra miditra hopitaly dia mametraka fanantenana sy ho avy amin'ireo vokatra ireo, indrindra ireo mararin'ny homamiadana. Rehefa niresaka tamin'ny olona teo am-pandriana aho, dia nilaza izy ireo fa mino ny siansa sy ny dokotera. Manana finoana matanjaka toy izany izy ireo hiadiana amin'ny aretina. Ny chat toy izany dia nandona lalina ny fanahiko ary nahatonga ahy hino avy amin'ny teny filamatra mifantoka amin'ny kalitao ka hatramin'ny tena izy. Mampalahelo fa nandao ahy mandrakizay ny raiko taorian'ny fitsaboana naharitra herintaona. Na eo aza izany dia fantatro fa tsy maintsy midina an-tany isika hahatratra ny fahalavorariana farany amin'ny vokatra tsirairay hanaovana raharaham-barotra, hitondra fanantenana sy hatsarana ho an'ny olona maro kokoa.
Ireo mpiasa ao amin'ny orinasanay dia miasa miaraka amin'ny fahatsapana andraikitra mavesatra sy andraikitra ara-tsosialy hatrany. Noho izany, ao anatin'ny fizotry ny fandraharahana sarotra mihoatra ny folo taona, ny fivoaran'ny vokatra sy ny safidin'ny mpamatsy anay dia nandalo fizahana fitiliana. Mikasika ny fifehezana kalitao, ny zavatra inoanay dia: ny vokatra tsy mahafeno ny fenitra dia tsy hatomboka, ary ny vokatra izay tsy manaraka ny fenitra dia tsy tokony hasaina. Mikasika ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fiaraha-miasa dia ny safidinay dia: ireo orinasa izay tsy manana fahatsapana ny fahamarinana sy ny fitantanana kalitao dia tsy hiara-hiasa hisorohana ireo vokatra lo vao tsy hidina any an-tsena. Ny filozofian'ny mpandraharaha ao amin'ny orinasanay dia ny famolavolana vokatra azo antoka sy mandaitra ho an'ny mpanjifa. Natsahatra ny vokatra mifanohitra amin'ny filozofian'ny orinasanay satria tsy vitan'ny hoe manome fahafaham-po ny traikefan'ny mpanjifa izany fa manimba ny lanja ara-tsosialin'ny marika misy anay. KAMED dia tsy marika fotsiny, fa finoana sy sanda kalitao manenjika ny fahalavorariana ary tsy hanaiky lembenana mihitsy.
Orinasa: Easten faran'ny faritra indostrialy Dongqiao, Distrikan'i Haishu, Ningbo ， Zhejiang.China
Birao: efitrano 701, Jianchen Mansion, Distrikan'ny orinasa any Ningbo atsimo, Ningbo, Sina.